Bit By Bit - Mifehy - 6.4.2 Beneficence
Beneficence dia mikasika ny fahatakaran-javatra sy ny fanatsarana ny mety / soa ny mombamomba ny fianarana, ary avy eo manapa-kevitra raha mamely ny mandanjalanja tsara.
Ny Belmont Report nandresy lahatra fa ny fitsipiky ny Beneficence dia adidy ny mpikaroka tsy maintsy mpandray anjara, ary izany dia mitaky roa: (1) tsy hanimba sy (2) hanomezana vahana ny mety ho tombontsoa sy manamaivana mety hanimba. Ny Belmont Report miresaka ny hevitra hoe "tsy manimba" ny Hippocratic fomban-drazana eo amin'ny fitsaboana etika, ary azo aseho ao mafy endrika izay mpikaroka "tokony tsy mandratra olona iray na inona na inona ny soa izay mety ho tonga amin'ny hafa" (Belmont Report 1979) . Na izany aza, ny Belmont Report manaiky fa ny fianarana ihany koa izay mety ho tafiditra mampiseho mahasoa ny olona sasany ho mety. Noho izany, ny filaza mandidin 'ny tsy nanao ny loza mety ho mifanohitra amin'ny filaza mandidy ny hianatra, hitarika mpikaroka mba hanao indraindray fanapahan-kevitra sarotra mikasika ny "rehefa izany dia azo hamarinina ny mitady sasany soa na dia eo aza ny mety tafiditra, ary raha ny tombontsoa tokony ho noraisina tany aloha noho ny loza. " (Belmont Report 1979)
Amin'ny fomba fanao, ny fitsipiky ny Beneficence dia adika ho midika hoe tokony manatanteraka mpikaroka dingana roa samy hafa: ny mety / soa famakafakana, ary avy eo ny fanapahan-kevitra mikasika ny na ny loza sy ny soa mety tsara hamely etika mandanjalanja. Ity dingana voalohany dia betsaka ny zavatra ara-teknika substantive mitaky fahaizana manokana, ary ny faharoa dia tena ny etika na aiza na aiza fahaizana substantive mety ho tsy dia sarobidy na manimba mihitsy aza.
A atahorana / soa famakafakana tafiditra na fahatakarana sy ny fanatsarana ny risika sy tombontsoa ny fianarana. Analysis ny loza dia tokony ahitana zavatra roa: ny mety ho voka zava-nitranga sy ny hamafin'ny zava-nitranga ireo. Nandritra izany dingana, ohatra, ny mpikaroka afaka hanitsy ny fianarana endrika mba hampihenana ny mety ho iray voka hetsika (ohatra, ahantòny avy mpandray anjara tsy mba misy mpanampy), na mampihena ny hamafin'ny iray voka hetsika raha miseho (ohatra, manao torohevitra azon'ny mpandray anjara izay mangataka izany). Ankoatra izany, mandritra ity dingana ity mpikaroka mila foana ao an-tsaina ny fiantraikan'ny asany tsy amin'ny mpandray anjara, fa koa ny tsy mpandray anjara sy ny fiaraha-monina rafitra. Diniho, ohatra, ny fanandramana amin'ny Restivo sy van de Rijt (2012) teo ny vokatry ny loka amin'ny Wikipedia tonian-dahatsoratra (noresahina tao amin'ny Toko 4). Eto amin'ity fanandramana, ny mpikaroka nanome loka ny sasany izy ireo tonian-dahatsoratra izay heverina ho mendrika ary avy eo fanarahan'ny ny anjara biriky ao amin'ny Wikipedia raha oharina amin'ny fanaraha-maso ny vondron'olona mitovy mendrika mpamoaka lahatsoratra izay ny mpikaroka tsy nanome ny mari-pankasitrahana. Ao amin'io fianarana manokana, ny isan'ny loka nomeny dia kely, fa raha ny mpikaroka no tondraky ny rano Wikipedia amin'ny loka dia mety ho nanakorontana ny fiaraha-monina ny mpampanonta, nefa tsy hanimba misy amin 'izy ireo. Amin'ny teny hafa, rehefa manao atahorana / soa fanadihadiana tokony hieritreritra momba ny fiantraikan'ny asa ny tsy amin'ny mpandray anjara fa ny izao tontolo izao ankapobeny kokoa.
Avy eo, indray mandeha ny loza no hamaivanina sy ny tombontsoa fanalehibiazana, mpikaroka dia tokony hanombana ny fianarana raha mamely mandanjalanja tsara. Ethicists Tsy fahazoan-dalana mankany tsotra summation ny vola sy ny tombontsoa. Indrindra indrindra, ny sasany hanome ny fikarohana loza impermissible na inona na inona ny tombontsoa (ohatra, ny tety Fianarana ny Tuskegee voalaza ao amin'ny Tantara Tovana). Tsy toy ny mety / soa famakafakana, izay amin'ny ankapobeny ara-teknika, ity dingana faharoa dia lalina etika, ary mety raha ny marina dia ny nampananana harena ny olona izay tsy manana foto-kevitra voafaritra tsara-faritra fahaizany. Raha ny marina, satria vahiny matetika mahita zavatra hafa avy amin'ny Insiders, IRBs any Etazonia dia tsy maintsy manana, fara fahakeliny, tsy mpikaroka iray. Raha ny zava-nitranga iray manompo ao amin'ny IRB, ireo vahiny afaka manampy hisorohana vondrona-hieritreritra. Koa raha misy manana olana na hanapa-kevitra ny tetikasa fikarohana mamely ny mety atahorana / soa fanadihadiana tsy manontany fotsiny ny mpiara-miasa, miezaha hangataka ny sasany tsy ny mpikaroka; ny valiny dia mety hahagaga anao.
Raha mampihatra ny fitsipiky ny Beneficence ny telo ohatra manasongadina ny zava-misy fa misy ny tsy fahazoana antoka momba ny Mitana matetika loza mialoha ny fianarana manomboka. , Ohatra, ny mpikaroka tsy nahalala ny mety na ny maha zava-dehibe ny voka fisehoan-javatra izay mety ho vokatry ny fianarany. Ity tsy fahazoana antoka, raha ny marina tena mahazatra amin'ny taona nomerika fikarohana, ary tatỳ aoriana ao amin'ity toko ity, aho hanokana fizarana iray manontolo ho amin'ny zava-tsarotra ny handray fanapahan-kevitra manoloana ny tsy fahazoana antoka (sampana 6.6.4). Na izany aza, ny fitsipiky ny Beneficence no soso-kevitra sasany fiovana izay mety ho ireo mba hanatsarana ny fianarana atahorana / soa mandanjalanja. Ohatra, fihetseham-po areti-mifindra, ny mpikaroka afaka niezaka ahantòny avy ny olona latsaky ny 18 taona sy ny olona izay mety ho tena mety rehefa ratsy ny fitsaboana. Afaka ihany koa izy ireo niezaka ny hampihenana ny isan'ny mpandray anjara amin'ny fampiasana fomba mahomby antontan'isa (araka ny voalaza amin'ny an-tsipiriany ao amin'ny Toko 4). Ankoatra izany, dia afaka niezaka mba hanara-maso ireo mpandray anjara sy hanolotra fanampiana ny olona izay niseho efa naratra. Amin'ny Andramo, karavato sy Time, ny mpikaroka afaka nametraka fanampiny fiarovana ao an-toerana, rehefa namoaka ny tahirin-kevitra (na ny fomba fiasan'ny dia nankatoavin'ny Harvard ny IRB, izay manolo-kevitra fa izy ireo mifanaraka amin'ny fanao mahazatra tamin'izany andro izany); Aho manolotra soso-kevitra voafaritra tsara bebe kokoa momba ny angon-drakitra famoahana tatỳ aoriana ao amin'ny toko rehefa milaza fampahafantarana mety (sampana 6.6.2). Farany, ao amin'ny encore, ny mpikaroka afaka niezaka mba hampienana faran'izay kely ny isan'ny mampidi-doza fangatahana izay noforonina mba hahatratra ny fandrefesana tanjon'ny tetikasa, ka mety ho voailika mpandray anjara izay indrindra-doza avy amin'ny famoretana governemanta. Tsirairay ireo fiovana mety dia hampiditra ny varotra-offs ho ao an-famolavolana ireo tetikasa, ary ny tanjona dia tsy ny milaza fa ireo mpikaroka tokony ho nanao izany fiovana. Kosa, ny tanjona dia ny maneho ny karazana fiovana izay ny fitsipiky ny Beneficence mety soso-kevitra.
Farany, na dia ny vanim-potoana nomerika no ankapobeny nanao ny milanja ny loza sy ny tombontsoa kokoa ny sarotra, izany no tena nanao azy mora kokoa ny mpikaroka mba hampitombo ny soa ny asany. Indrindra indrindra, ny fitaovana nomerika ny taona indrindra hanamora misokatra sy reproducible fikarohana, izay mpikaroka manao ny fikarohana tahirin-kevitra sy ny fehezan-dalàna natao ho mpikaroka hafa sy hahatonga ny antontan-taratasy omena ny besinimaro amin'ny alalan'ny famoahana fidirana misokatra. Izany fiovana hanokatra sy reproducible fikarohana, raha tsy hoe tsotra, manolotra ny lalana ho an'ny mpikaroka mba hampitombo ny soa ny fikarohana nefa tsy mampiseho ireo mpandray anjara mba misy fanampiny mety (angona fizarana dia miavaka izay hodinihina amin'ny an-tsipiriany ao amin'ny tsinjara momba ny fampahafantarana mety (Fizarana 6.6.2)).